Wax walba oo aad u baahan tahay si aad u ogaato Anavar-ga jirka ah
Waa maxay Anavar (Oxandrolone)?
Oxandrolone (53-39-4), oo lagu iibiyey magaca caanka ah ee Oxandrin iyo Anavar, oo ka mid ah kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo loo isticmaalo in lagu caawiyo kor u qaadista miisaanka ee xaaladaha kala duwan, si looga caawiyo ka soocista bukaanka borotiinka ee keena daaweynta corticosteroid muddo dheer, ka soo kabashada gubashada daran, si loo daaweeyo lafaha xanuunka la xariira osteoporosis, si loogu caawiyo horumarinta gabdhaha leh xanuunka loo yaqaan 'Turner syndrome', iyo calaamado kale. Waxaa afka laga qaataa.
Anavar loogu talagalay jirka jirka
Ma aragtay in maanta dad badan oo ku jiray qaabka ugu xumaa ay sii xoogaystaan, oo ka sii fiicnaadaan? Warbaahinta saxaafada ee bulshada, ku dhowaad sawir kasta oo la soo dhejiyay ayaa soo gaabiyey oo jidhkoodu dillaacay. Haddii aad ku fekereyso waxa kuugu filan, waxaad ogaan doontaa in tan loo adeegsado isticmaalka steroid. Waxay noqotay mid caalami ah oo adduunka oo dhan ah, dadkuna mar dambe uma baahna inay la kulmaan si ay ula kulmaan hadafkooda jirka.
Si kastaba ha ahaatee, si aad u gaarto tan, waa inaad doorataa daroogada saxda ah si aad u fuliso waxa aad rabto. Qofna ma doonayo in uu helo jidhka quruxda badan oo uu u dhinto saameynaha dambe ee daqiiqda xiga. Sidoo kale, waxaad heli kartaa jir wanaagsan maanta laakiin dhammaantood waxay galeen labadii toddobaadba.
Si looga fogaado wax niyadjab ah, waa inaad qaadataa steroosto loo yaqaan "Anavar". Waa steroid wanaagsan oo heer sare ah. Qodobkani, waxaan kuu sheegi doonaa dhammaan faa'iidooyinka ay ku sameeynayso -waxaad u baahan tahay dhammaan noocyada steroid.
Haddii aad rabto inaad ku hagaajiso safarkaaga jirka, markaas waa inaad ka fakartaa isticmaalka. Ma aha oo kaliya inaad ogaan doonto horumarka si dhakhso ah, laakiin sidoo kale waxaad ka yaabi doontaa natiijooyinka muddada-dheer. Haddii aad ku socotid qolka jimicsiga ama goobtaada shaqada, waxaad mar walba dareemeysaa sida boqor, waligeedna kuma helin wicitaan ku filan qof walba.
Dhamaanteen waan isku raacsan nahay in qaab-dhismeedka jirka uu ka mid yahay habka ugu da'da weyn ee loogu talagalay hagaajinta muuqaalka shakhsiyaadka, gaar ahaan ragga. Inkasta oo qof kastaa ku dhufo jimicsiga natiijo kale oo la rabo, hooseeyaha caadiga ah waa mid kasta oo doonaya inuu u fiicnaado, gubo dufanka dheeraadka ah isla markaana ku dar murqo badan. Dumarka, dib u soo celinta muuqaal haweeneed soo jiidasho leh ayaa ah rajo muhiim ah ka dib jir-dhisidda. Raggu waxay sameeyaan si ay u kordho murqaha sida jirkooda horay u qabeen. Waxaa jira habab badan oo lagu gaari karo tan, iyo farriimo badan oo ku saabsan internetka, culeyska culeysku wuxuu ku yimaadaa kor. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo gacanta ku haya xayawaanka saxda ah, culays-saaridda, iyo hab-nololeed loola dhaqmay. Tani waa isticmaalka steroids, tani waa qayb ka mid ah jigsawar ah in Anavar loogu talagalay in la buuxiyo markii la soo bandhigay suuqa. Waxyaabaha kale ee caan ah ee loo isticmaalo qashinka iyo jarista waxaad tixraaci kartaa "Dib-u-eegis Faahfaahsan Superdrol (Methasterone) loogu talagalay jirka dhismaha"
Anavar-Waa muuqaal qoto dheer
Anavar, oo sidoo kale loo yaqaan 'Oxandrolone' waa steroid anabolic taasoo si wacan u yaqaanaan bulshada caafimaadka iyo jirdhiska. Qofna waa inuu nacas kuu geystaa tan iyo markii loo arko inuu yahay steroids khafiif ah, ma aha wax faa'iido badan. Waxaa la yaab leh, waa steroid ugu fiican ee ragga iyo haweenka labadaba waa inay bilaabaan maanta.
Isticmaalida steroid waxaa mararka qaarkood loo soo gaabiyaa 'var' oo waa mid ka mid ah steroids afka laga helo. Cunto-saarkeedu yahay saamiga orrogenic waa 322-630: 24. Miisaanka molecular ee Anavar waa 306.4442 g / ml.
Nolosheeda firfircooni waa saacadaha 8-12 waxayna ku jiri kartaa jirka saddex ilaa afar toddobaad. Qaybta firfircoon ee Anavar waa Oxandrolone halka maaddooyinka aan firfircooneyn ay yihiin hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, lactose, iyo galleyda.
Anavar waa magaca ganacsiga ee loo isticmaalo suuq geynta kiimikada kiimikada ee kiimiko ah oo ah steroids anabolic. Xarunta ayaa markii ugu horreysay lagu sameeyay 1962, kadibna magaca ganacsiga wuxuu ahaa Anavar. Shirkadda Anavar waxay ahayd GD Searle & Co., shirkaduna waxay samaysay daroogada iyada oo ujeedadu tahay in lagu siiyo macaamiisheeda. Daawada ayaa si dhakhso ah u iibisay illaa 1989 markii wax soo-saarku si weyn loo yareeyey ka dib markii FDA ay cadaadis weyn ku soo rogtay shirkadda iyada oo ku qeexday saamaynta Anavar ee stobbaareyaasha anabolic ee macaamiisha. Steroid waxay arkeen maqnaansho buuxda oo ka timid suuqa kadib markii FDA ay ku adkeysaneysay in aan la soo saarin waxaana lagu calaamadeeyaa dhamaystirkii Anavar steroid.
Si kastaba ha noqotee, 1995, shirkad kale ayaa la wareegtay GD Searle & Co. oo tagay isla markaana bilaabay in ay soo saaraan daroogada inkastoo ay ku jiraan magac calaamad ah. Shirkadda duuga ah waxay sameysay cusbitaalka Oxandrolone, laakiin magaciisa waxaa lagu magacaabo Oxandrin. Shirkaddu waxay la kulantay iibka weyn ee steroid qadarin, laakiin cilladahooda ugu weyn waxay ahaayeen in ay lahaayeen monopoly ee suuqa oo sidaas ku iibiyey si aad u badan. Nacasku wuxuu ku riyaaqay iibinta daawada mudo gaaban illaa iyo markii uu ciyaaryahan kale u yimid samatabbixiyayaal jirey iyo soo saaray Anavar iibinta qiimo ahaan qiimaha hooseeya. Daroogadu waa ka awood badan tahay marka shirkadda Savient ay qabato mid ka mid ah monopoly ee wax soo saarka, laakiin weli waa qaali ah steroids kale.
Daaweynta HIV / AIDS
Ka dib helitaanka AIDS-ka ee 1980s, cilmi-baarayaashu waxay ku dhibtoodeen inay ogaadaan sababta cudurkan. Waxay qaadeen HIV / AIDS oo ah cudur kudhexaad ah, maaddaama aysan dawo lahayn xilligaas, waxay ku baxeen oo kaliya xulashada daaweynta calaamadaha. Anavar wuxuu ka mid ahaa stabdhabyada anabolic ee loo isticmaalo in lagu caawiyo bukaanada inay ka soo kabtaan culeyskooda muruqa iyaga oo aan la kulmin jahwareer. Waxa kale oo ay ka caawisay helitaanka awoodooda iyo rabitaanka cuntada.
Marka laga reebo caawinta kuwa qaba AIDS iyo cudurada lumiya, Anavar (53-39-4) ayaa sidoo kale gacan ka gaystay in ay gubaan dhibbanayaasha. Daraasad la sameeyey, bukaanno ayaa ku dhacay dhaawac ka badan 40 gubasho waxaana lagu daaweeyaa Anavar, oo dhakhso u bogsaday, dibna dib ugu soo laabtay bukaannadii ayaa isbitaalka tagay si dhakhso ah marka loo barbar dhigo kuwa aan isticmaalin Oxandrolone. Daawada ma aysan dhicin mid dhibaato ah oo soo gaartay, taasina waxay ka dhigtay cilmi-baarayaasha in ay u calaamadoobaan si amaan ah marka loo isticmaalo qiyaasta saxda ah iyo degaanka la kontaroolo.
Anavar waxaa markii hore loo isticmaalay garoonka ciyaaraha fudud ee 2000s. Waxay ahayd waqtigii "Muscle Media 2000" ee daabacan oo si fiican loo yaqaan looga wada hadlayay steroids si cad. Anavar ayaa aad loogu qiimeeyay joornaalka, sababtoo ah khatarta hoose ee saamiga faa'idada. Ka dib markii la soo jeediyay, Anavar ayaa si ballaaran loo ogaa waxaana loo isticmaalay adduunka oo dhan sababtoo ah sunta hoose ee jirkeeda ku jirtay.
Maanta, anavar waa caalamka ugu caansan ee stabdhabka anabolic. Ciyaartu waxay isticmaashaa bilawga wareeggooda si ay u gaarto guulaha iyo dhammaadka iyada oo loogu talagalay saameynta daaweynta. Waa mid aad u caan ah oo loo yaqaan "bulking or stacking" iyada oo ku xiran xargaha. Inkastoo isticmaalka uu sharci darro yahay qaybo ka mid ah adduunka, waxaad ogaan doontaa in Anavar uu badbaado yahay marka loo isticmaalo si sax ah.
Waa isbeddel nolosha ah maxaa yeelay waxay ka caawisay bukaanno badan oo bogsiiya kuna noolaan kara raaxo. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa dadka doonaya inay hagaajiyaan ra'yigooda muuqaalka ah, istaandarka, iyo xoogga iyada oo aan la haysan khataro halis ah oo ah steroids kale.
Oxandrolone weli waa suuqa, laakiin badanaa waxay la socotaa magacyo kale sida Protivar iyo Lonavar. Natiijooyinka wax soosaarka guud ayaa wali la mid ah kuwa Anavar asalka ah. Ku iibsato Anavar, waa in aanad, sidaas darteed, ku adkeyso magaca calaamadda. Halkii, weydii Oxandrolone. Si kastaba ha ahaatee, maaha inaad iibiso miiska, oo waxaad u baahan tahay warqad dhakhtar kuu qoray oo ku siin doona qiyaasta Anavar ee aad u baahan tahay si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Daawada ayaa weli ah mid ka mid ah steroids ugu caansan sababtoo ah saameyn sahlan ee macaamiisheeda. Sidoo kale ammaan ayaa loogu talagalay isticmaalka ragga iyo dumarka labadaba, tani waxay ka dhigeysaa xulasho sare ee shakhsiyaad badan. Si loo fahmo habka shaqada ee daroogada, si kastaba ha ahaatee, waxay muhiim u tahay maadaama ay wali tahay daroogo inkastoo ay saameyn ku yeeshaan waxyeelo yar.
Noocyada kala duwan ee Anavar
Anagu ma iloobi karno xaqiiqda ah in Anavar uu ku yimaado qaabab kala duwan oo ku sahlan. Laga soo bilaabo dareeraha, kiniinka, waxaad ka iibsan kartaa waxa adiga kugu haboon inaad isticmaasho. Dareerku ma tilmaamayo Anavar laysku duro; waa ka-joojin laga qaado afka oo si fudud loo nuugo.
Anavar waa wax caadi ah, oo dhanna waa inaad miisaantaa si aad u hubiso in aad qaadato qadarka saxda ah oo aad afkaaga geliso ka dibna liqo. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa Oxandrolone. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Anavar si aad u sameysid kondhomka sida qiyaasta la siiyey.
Waxyaabaha fiican ee ku saabsan kiniinka liqitaanka waa inuusan xanuun lahayn oo aad ku dhejin kartid meel kasta oo aad ku fadhiisan kartid ama cagahaaga.
Sidee Anavar u shaqeyneysaa?
Inta lagu jiro wax soo saarka Anavar, dehydroepiandrosterone ayaa loo isticmaalaa. Waxay ka timaaddaa oo waa mid sida molecularly la mid ah dihydrotestosterone sidaa darteed jidhku wuxuu ula dhaqmaa si la mid ah waxa ay qabato hormoonka xajmiga.
Markaad liqeyso Anavar, jidhku wuxuu ka soo horjeedaa sida ay u sameeyaan marka heerkulka testosterone kor u kaco. Sidaa awgeed, waxaa jira koror ku yimaada tamarta, xoogga iyo murqahaaga. Sidoo kale, waxay ka caawisaa jirkaaga inuu gubo dufan badan madaama uu hagaajinayo dheef-shiid kiimikaadka.
Steroid Anavar wuxuu isbeddelayaa qaabka jirkaaga oo keligiis. Si kastaba ha noqotee, in la dhajiyo geeddi-socodka aad u baahan tahay si aad u qaadatid borotiino badan oo ka shaqeeya. Jirkaagu wuxuu noqdaa mid anabolic oo dheeraad ah isaga oo sameynaya waxqabadyo jimicsi oo dheeraad ah.
Si kale haddii loo dhigo, jirkaagu wuxuu ku guuleystaa tamar iyo firfircooni oo muhiim u ah inta lagu jiro howsha. Sidaas awgeed, waxay si deg deg ah uga jawaabeysaa koritaanka murqaha iyo kuwa waaweeynba sida ay hoos u dhigto dufanka dheeraadka ah ee jirkaada. Anavar wuxuu siinayaa tamar dheeraad ah si uu u xoojiyo habka anabolic taasoo mararka qaar gubi dufanka ka tagaya muruqyada adag. Waxaad ogaan doontaa qofkasta oo isticmaalay Anavar (53-39-4) wuxuu ubadhanayaa waxyaabo badan oo soo kabsasho leh sababtoo ah muuqaalkooda uur-ku-jirka ah ee aan si fudud loo gaari karin.
Anavar waa steroid, inta badan steroids waxay leeyihiin qaab isku mid ah oo ku saabsan jirka. Waxaa jira laba qaybood oo muhiim ah oo la eego marka la tixgelinayo xulashada steroid si loo qaado. Waxaa jira anabolic iyo saameynta 'myrogenic'. Tusaale ahaan, qofku doonayo in uu kordhiyo xajmiga murqaha iyo dufanka ka saaran jidhka waa in uu qaataa steroids kuwaas oo saameynaha anabolic ay ka soo baxaan natiijooyinka asrogenic. Marka la eego shuruudaha fudud, steroid anabolic sida ANavar wuxuu u shaqeeyaa hababka soo socda:
Sii kicinta dheecaanka borotiinka. Iyadoo borotiino badan, muruqyada jirka ayaa kordha, ragga, muruqyada ayaa bilaabi doona inay horumaraan.
Natiijada kale ee anabolic waa xajmiga cuntada. Cudurka steroid wuxuu sababaa dheecaanka borotiinka, sidaas darteed jidhku wuxuu u baahan yahay tamar badan oo tamar ah si uu u awoodo. Sidaa daraadeed, waxaa la filayaa in la kordhiyo rabshadaha cuntada, laakiin maaha arrin diidmo ah sababta oo ah cuntadu waxay si weyn u kordhineysaa tirada jirka.
Steroid sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa soo saarista "leucocytes red". Muruqyada jirka ayaa si dhaqso ah u kordhaya, sidaas darteed, waxay u baahan yihiin kor u kaca oksijiinta. Tani waxay keenaysaa in jirka uu soo saaro unugyo dhiig oo casaan ah si uu u buuxiyo yaraanta. Saameynta tani waxay kor u qaadaysaa dulqaadka murqaha. Dhibaatooyinka qaarkood ayaa sidoo kale ku doodaya in Anavar (53-39-4) waxay faa'iido u leedahay bixinta waxqabadka wadnaha.
Anavar sidoo kale waa mid aad u sareysa sida mid ka mid ah steroids yar oo fududeynaya gubashada dufanka jirka. Cudurrada kale ee stabdhabka ayaa loo yaqaanaa inay yeeshaan hab farsamo oo shaqaynaya taas oo ku lug leh waxqabadka dheef-shiid kiimikaadka, taasina waxay keenaysaa luminta jidhka dufanka. Si kastaba ha ahaatee, Anavar, waa hab kale oo lagu gaari karo natiijo wanaagsan iyada oo si toos ah ugu lug leh kor u qaadista lipolysis. Hormoonka ayaa sidaan u sameeyaa isagoo si firfircoon iskugu xiraayo daaweeye iyorogen
Lafaha ayaa sidoo kale sii wanaajinaya iyada oo la kordhiyo oksijiinta muruqyada.
Anavar waxa uu fuliyaa dhammaan faa'iidooyinka kor ku qoran oo leh saameyn yar oo dhibcood leh oo ku yimaada isticmaalaha. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto daroogo, gaar ahaan steroids, waxaa loo qaadan karaa in ay leeyihiin natiijooyin wanaagsan oo kaliya. Marka adiga qaado Anavar, waxaad fileysaa inaad dareentid natiijooyin hadhuudh ah oo ku xiran isticmaalka steroids. Si kastaba ha noqotee, wax fiican oo ku saabsan daroogada ayaa ah in ficil-celinta iyo xiniinyaha ay soo mareen ayada oo ay soo martay. Saameynahan is-goysyada ee steroids waxaa ka mid ah:
Dheecaan xad dhaaf ah ee hormoonka testosterone. Tani waa natiijo caadi ah isticmaalka steroids ragga, waxayna badanaa keentaa timo dhicid.
Dib-u-dhaca wuxuu ku dhici karaa isticmaalka steroids, jidhkuna wuxuu soo saari karaa testosterone hooseeya. Tani waxay saameyn ku yeelan doontaa isticmaalka galmada ee qofka isticmaala.
Waxqabadka kordhay ee qanjirada qanjirka jirka. Kuwani waxay keenaan qarsoodi u horseeda muuqaalka finanka jirka.
Dhibaatooyinkan oo dhan waxay u nugul yihiin qof u isticmaalaya steroids. Si kastaba ha ahaatee, Natiijooyinka Anavar waxay ka fog yihiin rajooyinka steroids caadi ahaan. Sababta sababta Dhismaha jirka ee Anavar waa mid caadi ah waa in daroogada loo sameeyey si loo helo isku dheelitir buuxa oo u dhaxeeya anabolic iyo saameynta 'androgenic'. Natiijooyinka anabolic ayaa ah mid aad u sareeya oo ah kuwa korontada ku yar oo aan la ogeyn. Anavar dumarku waa amaan in la isticmaalo iyada oo la tixgelinayo cawaaqib xumada yar. Sidaa darteed, markaad mareyso wareeggaaga Anavar waxay fileysaa in isbeddelada kor ku xusan ee jirkaada laga yaabo inay mararka qaarkood la socdaan waxyeelo fudud.
Daroogadu waxay leedahay saamiga ugu habboon ee xudduudaha kuwaas oo loo tixgelinayo in ay keenaan dhaqdhaqaaqa jidhka oo ka fiicnaado testosterone dabiiciga ah. Tusaale ahaan, qiimeynta anabolic testosterone waxay ku taallaa 200 halka saameynaha ifrogenic lagu qiimeeyo 100. Si kastaba ha noqotee, Deca-Durabolin oo ah steroid oo ka hooseeya Anavar ayaa ku jira 125 oo ku yaala qiyaasta anabolic iyo hoos udhaca 37 ee dhinaca gees-galka. Inkasta oo waxqabadka ururka Anavar hoormoonka waa mid sahlan, waa mid aad u awood badan waxaana uu hagaajin karaa waxqabadka jirka saddex jeer oo ka badan tijaabada caadiga ah. Tani waxay u muuqataa sida ficilka daroogadu u horseedi karto horumarinta dhimashada ee user, laakiin taasi ma aha kiiska.
Waa maxay Anavar aad u faa'iido leh waa;
Waxay kordhisaa heerka Phosphocreatine- Tani waxay jidhka ka caawisaa inuu gubo dufanka si guul leh.
Waxay kordho xajinta nitrogen- Dhammaanteen waan ognahay in borotiinku muhiim u yahay marka ay timaado fatahaada iyo xoogga. Nitrogar waa dhismaha dhismaha borotiinka, iyo joogitaanka nitrogen ka badan macnaheedu waa in uu jiro dheellitirnaan borotiin ka fiican sidaas darteed luminta fatashka degdega ah.
Baaskiilka Anavar iyo xargo
Ujeedada ugu weyn ee isticmaalka Anavar waa in la kordhiyo xoogga iyo miisaanka. Waxaa intaa dheer, waxaa loo isticmaalaa in lagu gubo xaddiga dufanka jirka. Sidaas awgeed Anavar ayaa si weyn u isticmaala kuwa raadinaya inay yeeshaan muruqyo badan oo tayo leh oo raba inay yeeshaan xoog badan. Waxay ka dhigeysaa in lagu dhajiyay "Nooca steroid."
Istaraatiijinta Anavar waa ficilka uu qofku isticmaalo sterooto isla markaana leh steroids kale si loo gaaro natiijada la filayo. Labada rag iyo dumarkuba waxay ku yareeyn karaan inay gooyaan ama buluugga. Waqtiga intiisa badan ragga ayaa xareeya muddooyinka goyntooda si ay u yareeyaan dufanka jirkooda.
Baaskiilada waxaa lagu qeexay xilliga uu qofku qaadanayo steroid gaar ah muddo ka dibna wuxuu joojiyaa inuu u ogolaado jirka inuu ku nasto muddo wakhti ah. Baaskiilku wuxuu ku tiirsan yahay rabitaanka shakhsi ahaaneed ee jirka. Sidoo kale, baaskiilka haweenku way ka duwan yihiin ninkaas. Dumarku waxay socon karaan ugu badnaan lix wiig halka ragga ay ku socon karaan xitaa in ka badan siddeed toddobaad. Si ka duwan sida kale ee steroids ee suuqa, muddada aan isticmaalka ee Anavar (53-39-4) waa gaaban maxaa yeelay waxay qaadataa seddex illaa afar asbuuc oo loogu talagalay dumarka iyo haweenka jidhka labadaba.
Muxuu Anavar dhab ahaantii sameeyaa?
Anavar ayaa loo qoondeeyey inuu keeno faa'idooyinka soo socda iyo saameynta dhammaadka isticmaalaha:
Steroid Anavar wuxuu ku soo noqnoqonayaa qashin gaaban oo ah isticmaalka. Oxandrolone sida caadiga ah ma sameysanto dhismo macaan leh. Sidaa darteed, markii la cunay, miisaanka la helay waxaa loo beddelaa qulqulka murqaha. Taas macnaheedu waa inay jiri karto biyo yarida muruqyada marka la isticmaalayo Anavar. Hoormoonka wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan qaababka kale ee istiraatiijiyadeed ee sida steroids sida Anadrol oo waxay ka dhigtaa muruqyada caatada ah. Faa'iidada tan waxay tahay in macaamiisha la heley marka la isticmaalayo Anavar si sahlan oo loo ilaaliyo wixii ka soo baxay iyada oo loo marayo isticmaalka hababka kale ee xoogga saameeya ee steroids. Sidaas awgeed, waxay ku habboon tahay shakhsiyaadka jecel inay daadiyaan dufanka isla markaana isla markaasna ilaaliyaan muuqaalka caatada ah.
Inta badan isboortiga, tiro badan oo jidhka ah ayaa caddayn kara inay tahay carqalad ku timaadda waxqabadka qofka. Sababtaas awgeed Anavar waxaa loo aqbalaa sida saxda ah ee loo yaqaan 'steroid friendly' oo ay sameeyaan ciyaaryahano badan maxaa yeelay waxay ka caawisaa hagaajinta jirkooda halka isla markaa ay sii wadi karto baahida jirka ee loo baahan yahay. Inkasta oo Anavar aysan awood u lahayn tamar kale oo la siinayo steroids sida Halotestin iyo Dianabol, haddana waxay faa'iido u leedahay bixinta tamarta cayaaraha. Xoogga la xariira steroid waa mid la aqbali karo maadaama uu horseedayo xawaaraha iyo awoodda waxqabadka waqtiga jirdhiska. Daroogadu waxay keenaysaa in yaraanta biyaha lagu haynayo sidaas awgeed cayaartu ma khatar galinayso helitaanka baaxadda wareegga isticmaalka. Wax walba oo aad ka ogaanayso Proviron ee jirka dhismaha
Isticmaalka Anavar wuxuu horseedaa hagaajinta murqaha muruqyada. Muruqyada ayaa sii wadi doona jimicsi muddo dheer, sidaas darteedna qofku si dhakhso ah uma daali doono. Tani waxay ka dhigaysaa daawooyinka daroogada ku haboon ee loo isticmaalo ciyaartoyda doonaya in ay kordhiyaan waxsoosaarkooda tababarka. Anavar waxay sidaan oo dhan u sii wadi doontaa wali wanaajineysa meelaha kale ee jidhkaaga ka dhigaya mid ka mid ah hababka ugu fiican oo saaxiibtinimo ee waqtiyada xaadirka ah. Tilmaamaha ugu Habboon ee Methyltestosterone loogu talagalay Jimicsiga
Wax saameyn ah kuma yeelan aromatic
Arombisashka waa is-beddelka estrogen. Sababtoo ah Oxandrolone ma aromatize, kuwa isticmaala ma aha inay ku dhacaan wax saameyn ah oo ku salaysan estrogen, tusaale ahaan, haynta biyaha iyo ginecomastia. Waxyaabaha ugu weyn ee tan ku saabsan waxay tahay inaad ku raaxeysan karto dhammaan faa'iidooyinka Anavar ay bixiso iyada oo aan lagama maarmaynin xayiraad ka weyn.
Anavar ayaa ku guuleystay quluubta dad badan sababtoo ah faa'iidooyinka muddada-dheer ee ay bixiso. Dumarka lafdhabarka ah ee murugada leh iyo muruqyada caatada ah ayaa la ogaadey ka dib markii la isticmaalayo daroogadaas qiime-sareeya lagama lumin doono waqti gaaban. Haddii aad sameyso daaweyn dabagal dabiici ah oo cajiib ah, waxaad u badan tahay inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka illaa inta la jecel yahay. Iyadoo Anavar, waxaad heli doontaa guulo badan oo la isku halleyn karo marka la barbar dhigo steroids kale.
Isticmaalida steroid afka ah, daawadani ma sameyso inaad yeelato waxyeelo soo raaca oo kaa tagi doonta. Isticmaalka Anavar waxba uma geysaneyso beerkaaga ama saameyn kuma yeelan doonto cadaadiska dhiiggaaga.
Waxaad ku jajabin doontaa tareeyaha
Miyaad gaadhay heer dhibic ah oo muruqyadaadu aanay u muuqan in ay adag tahay ama sii daadihin wax kale? Oxandrolone ayaa ku soo laaban doonta taas oo adiga ku siineysa koror dheeraad ah. Haddii aad ku jirtay qolka jimicsiga tan iyo wakhtigii lagu jiray oo aan weli gaarin hadafkaaga, markaa waa inaad ka fakartaa isticmaalka Anavar.
Natiijooyinka Anavar Ha u horseedin dhismo ballaaran oo ay keenaan sii-haynta biyaha. Higsashadu waa xoogaa yaraa marka loo eego wixii kale ee steroids ay bixiyaan. Sidaa awgeed, waad hubsan kartaa in miisaanka uusan ka tagi doonin xitaa ka dib marka lagu sameeyo wareegga sababtoo ah sii-haynta biyaha.
Cuntada kor loo qaado
Daroogadaas waxtarka leh ee waxtarka leh waxay kobcisaa faa'iidooyinka aad ka hesho cuntada aad cuneysid iyo adigoo xakameynaya kalooriyeyaashaaga. Sidaa darteed, cunid nadiif ah oo la isticmaalayo Anavar ayaa kaa caawin doonta inaad hesho jirka aad rabto.
Waxaad ogaan doontaa in marka la sameeyo wareeggaaga, waxaad ku guuleysan doontaa in jirkarka dareemaha ee aad u adag. Dhibaatadu waa sababta oo ah muruqyada la dhisay maaha mid ka dhalanaysa biyaha.
Higsashada degdega ah
Uma baahnid inaad joogtid muddo sanado ah si aad u ogaato guulaha ay keeneen Anavar. Looma baahna! Si ka duwan noocyada steroids badan, daawadani waxay ku siin doontaa natiijooyin labadii toddobaad ee hore. Isku darka tababarka, waxaad ogaan doontaa saameynta hal toddobaad.
Waxaad ka mahadcelineysaa xaqiiqda ah in Anavar uu yahay stero-si dhakhso ah oo sidaas ah oo waxtar leh markaad bilawdo wareeggaaga. Kuwo badan oo jidh-dhiseyaashu waxay jecel yihiin inay sidaan sameeyaan si ay ugu guuleystaan ​​muruqyada muruqyada degdega ah iyo guulo xoog leh. Haddii aad sidoo kale jeclaan lahayd in aad uqorto wareeggaaga habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah Anavar waa heshiiska dhabta ah.
Waxaad jeclaan doontaa natiijada in Oxandrolone ay ku siiso marka aad soo bandhigto dhamaadka wareegga. Marka loo isticmaalo in lagu dhammeeyo wareegga, Anavar wuxuu ku siin doonaa farsamooyinkaaga iyo guulahaaga.
Natiijooyin wanaagsan oo lagu gaaro noocyo kala duwan
Anavar waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kaniiniyada iyo foomka dareeraha ah. Sidaas darteed waad iibsan kartaa waxa ugu fiican ee kugu habboon. Uma baahnid inaad ku guuldareysato inaad qaadato Anavar sababtoo ah waxaad necbaan dhadhanka dareeraha Anavar. Waxaad mar walba dalban kartaa kaniiniyada oo si habboon u qaadataa.
Wuxuu xoojiyaa kor u qaadida waxqabadka fudud ee haweenka
Ma waxaad raadineysaa inaad leedahay xoog dheeraad ah sida orodyahanka? Dhib ma laha. Anavar waxay si gaar ah ugu habboon tahay ciyaartoyda haweenka ah ee raadinaya gees. Maxay tahay in badan oo ay tahay in ay ku siiso guulo muruq ah iyo awood aad u fiican.
Dumarka uma baahna taageero ama PCT
TheAnavar waxaa si fiican u jecel dumarka, sababtoo ah uma baahna inay iibsadaan alaabta sida ragga. Waxyaabo kale ayaa ah in aanay u baahnayn inay daweeyaan wixii daaweyn ah ka dib wareegga. Waxa kaliya ee ay ubaahanyihiin inay sameeyaan waa ay hoos u dhacaan marka ay dhammeeyaan wareeggooda waxayna cunaan nadiif ah laba toddobaad kadib wareegga. Faa'iidada sameynta tani waa in ay hoos u dhigto naxdinta jirka ka dib markii ay ka timid isticmaalka Anavar.
Dumarku xitaa waxay helayaan qiyaas yar
Dumarku marnaba ma dhibaan inay bilaabaan natiijooyinka. Qiyaas yar oo u dhaxeysa 5mg-10 mg oo aad wanaagsan tahay inaad tagto. Waxay ka dhigaysaa murqaha fudud ee jeebka maaddaama aadan isticmaalin wax badan oo ka mid ah badeecada.
Lafaha lafaha leh waa dad badan oo ku dadaalaya in ay gaaraan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan Anavar waa marka aad go'aansato inaad isticmaasho, waxaad ogaan doontaa in ilkahaaga iyo lafahaaga ay xoog yeeshaan. Looma yaabin in loo isticmaalo in lagu daaweeyo lafo-beel hore.
Waxay keentaa baqdin galinta HPTA
Si ka duwan noocyada kale ee steroids, Anavar wuxuu gacan ka geystaa xakameynta Hypothalamic-Pituitary-Titis Axis (HPTA). Taas macnaheedu waa in wax-soosaarkaaga testosterone weli yahay mid joogto ah.
Daawada ayaa ku jirta jirkaaga muddo gaaban
Inaad haysato siddeed saacadood saacado nus ah, Anavar waa unugyada kaliya ee steroid ah oo ku jira jidhkaaga muddo gaaban. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad xitaa qaadan karto 2-3 maalintiiba maadaama aysan ku jirin nidaamkaaga muddo dheer.
Waxay kordhin doontaa xooggaaga si aan caadi ahayn
Kiniinada Anavar ayaa xaqiijiyay in ay si xoog leh kor ugu qaadaan xoogga dad badan. Ma dooneysaa wax caddayn ah? Daraasad lagu sameeyay 12-usbuuc ayaa muujisay in xitaa ragga da'da ah ee qaata waayo-aragnimada Anavar ay kor u qaadeen awooda iyo guulaha la qabsiga laf-jebinta, saxaafada, iyo jimicsiga saxaafada.
Awoodda si aad uga soo kabato xirfadaheeda dhaqso
Waad shaqeyn kartaa maalin kasta oo ka mid ah toddobaadka adiga oo aan daalanayn. Anavar, uma baahnid inaad ka baxdo tababarka weyn. Ma aha oo kaliya inay ku siiso awood dheeraad ah si aad u tababbarto dhammaan qaybaha jidhkaaga laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad si degdeg ah u soo kabsato. Hadda waxaad dhameystiri kartaa fadhiyadaada jimicsiga oo sahlan.
Waxay yareysaa dufanka caloosha
Miyaad la halgamaysaa dufanka qaarkood? Uma baahnid inaad sii walwalbid sababtoo ah Anavar wuxuu ku siin doonaa calool galka oo aad had iyo jeer jeceshahay. Si aad uga dhigto xitaa xiiso badan, daraasad lagu sameeyay 1995 waxay muujisay in Anavar ay aad u faa'iido badan tahay in lagu gubo dufanka dufanka ee ragga oo leh tijaabo yar yar.
Waxaa loo adeegsadaa inta uu wareegayo wareegga
Ma qaadanayo waqti ku filan daroogada ayaa hor istaagi karta shaqadaada HPTA inaad ka soo kabsato. Si kastaba ha ahaatee, Anavar ayaa jidhkaaga siin doona nasasho ka soo xeryaha iyo kuwa xuubka ah oo sameynta xulasho wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jidhka sameeya kuwaas oo xiiseynaya in ay isbaaraan.
Karkaarkaaga wadnaha ma saameyn doono
Isticmaalka Anavar ma joojin doonto awoodda wadnahaaga. Si ka duwan noocyada steroids qaarkood, midkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso tababarka wadnahaaga inta aad jeceshahay.
Way kugu dhiirran tahay
Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad dareentid in guulahaagu aad u yareeyaan oo aad ka fekereyso inaad gelisid kulammadaada tababarka ilaa dhamaadka. Waa la fahmi karo! Haddii aad rabto inaad ku raaxeyso fadhiyada jimicsiga markaa qaadashada Anavar waa inay noqoto waxa ugu horreeya ee aad tixgeliso inaad ku dhejiso natiijooyinkaaga.
Samee muruqyo la qeexay
Anavar ayaa ku siin doona murqaha dhab ahaantii lagu qeexay. Waxaa intaa dheer, unugyada ayaa la nadiifin doonaa maxaa yeelay biyo ma haynin. Wixii guurka ah ee soo kordhay laakiin aad rabto in si qotodheer loo qeexo, Anavar ayaa shaqada kuu qaban doonta.
Kiniiniga Anavar wuxuu caawiyaa dhaawacyada iyo nabarrada bogsiiya shan jeer ka dhakhso badan marka la barbar dhigo isticmaalka. Dhakhaatiir badan ayaa u qorey in loo isticmaalo cirbadaha lagu duro daaweynta nabarrada.
Waxay ku dareysaa xawaarahaaga
Iyada oo cayaaraha iyo dadka ku lug leh isboortiga oo raadinaya in ay sii wadaan tartan, Anavar waxay u adeegsataa maaddaama ay hagaajinayso waxqabadka muruqyada iyada oo aan la kordhin miisaanka.
Waxqabadka neefsiga ee wanaagsan
Anavar wuxuu u shaqeeyaa bukaanada la il daran tetraplegia, taas oo keenta curyaanimo taasoo keentay in la dhameeyo ama qayb ahaan aan awood u lahayn isticmaalka midabada iyo lugaha. Waxay ka caawisaa yareynta neefsashada. Isticmaalka steroid this, ciyaartooyda waxay awood u yeelan karaan in ay adkeeyaan fogaanta dheer iyo hagaajiyaan shaqadooda neefsiga.
Saameynaha ka hor iyo ka dib Anavar
Natiijooyinka Anavar ka hor iyo ka dibba waa kuwo toos ah si loo ogaado. Inkastoo ay jirto, shaki la'aan, doorashada ugu sareysa ee cayaartoy badan oo ku xiran faa'iidooyin badan, ayaa sidoo kale leh waxoogaa qaladaad ah, inkastoo ay aad u yaryihiin. Marka steroid loo isticmaalo si masuuliyad leh marka loo eego daawooyinka dhakhtarku qorayo, daroogadu waxay leedahay saameyn xun eber. Inta badan waxyaabaha ay dad badani ka baqayaan in ay dareemaan ka dib markay qaataan steroids looma arko isticmaalka Anavar. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah saameynaha la xiriira isticmaalka steroid:
Stavoid Anavar ma haysanin wax saameyn ah oogada. Tani waxay badanaa sabab u tahay awood la'aanta ah inay samayso dhismo aromatic leh oo ku xiran samaynta biyaha. Sidan oo kale, qaadashada Anavar, lagama yaabo inaad la kulanto ginecomastia. Marka la eego in ay jirto fursada eey ku filan tahay sii-haynta biyaha, isticmaalka Anavar ma keento cadaadis dhiig oo sarreeya. Dhibaatadan halista ahi waxay keeni kartaa jirku inuu leeyahay kayd ballaaran oo biyo kayd ah.
Anavar laguma darin sida steroid ah oo leh fursado badan oo lagu kicin karo dhaqdhaqaaqa quudinta, laakiin fursadaha dhacaya weli waa suurtogal. Marmar dhif ah, Anavar waxay keeni kartaa timo lumis iyo horumarinta finanka. Dumarka, hormoonku wuxuu sababi karaa koror timo meelaha aan lahayn timo ka hor. Dhibaatooyinkaas waxaa la filayaa in ay dhacaan dhowr jeer illaa iyo markii ay suurtagal ka tahay Anavar oo ah mid hooseeya. Markaad isticmaasho steroids kale, waxaa la isticmaalaa 5-alpha reductase waxaa loo isticmaalaa si loo yareeyo saameynta saameynta unugyada asrogenic ee qofka isticmaala. Si kastaba ha noqotee, intaad isticmaalayso Anavar, ma jirto isticmaalka isticmaalka wakiilka dhimista maadaama Anavar horay loo yareeyey.
Dumarka, waxyeelada ifrogenic waxaa lagu noqon karaa mid aad u badan haddii ay dhacaan in ay dhacaan. Mid ka mid ah saameynta ugu weyn ee la filayo Anavar waa calaamadaha fayadhowrka. Kuwaas waxaa ka mid ah isbeddelada sida kor u kaca codka iyo kororka xajmiga xajmiga. Hase yeeshee, suurtogalnimada dhacdadu waa mid hooseeysa oo hadana jirta, waxaa si dhakhso ah loo xakamayn karaa iyada oo la isticmaalayo isticmaalka daroogada. Waxaa lagugula talinayaa in aadan iska indhatirin saameynta steroidkaan waa soo bandhigis gaar ah oo loo lee-yahiin neef-mariib maxaa yeelay waxay u jeedsan karaan si joogto ah.
Tani waa aag ka welwelsan marka ay timaado isticmaalka Anavar. Hormarka ayaa la ogyahay in uu saameeyo heerarka kolesteroolka. Marka la qaado, heerarka HDL ee Cholesterol hoos ayuu u dhacaa marka la eego kuwa LDL Cholesterol loo arko inuu kor u kaco. Isbeddelada ayaa ah kuwo la taaban karo, waana inay noqdaan kuwo si firfircoon loo tixgeliyo iyada oo mid ka mid ah uu go'aansado isticmaalka Anavar. Dhiirrigelin waa in loo tixgeliyaa kuwa qaba dhibaatooyinka kolestaroolka. Waa in aysan isticmaalin steroids Anavar xaalad kasta. Kuwa caafimaad qaba maaddooyinka kolestaroolka, ilaalinta cunto wanaagsan waxay fure u tahay in waxyaabaha la sii wado marka la isticmaalo Anavar.
Intaa waxaa dheer, waa lagama maarmaan in Anavar loo isticmaalo si loo yareeyo isticmaalka dufanka buuxa iyo sidoo kale sonkorta. Xakamaynta heerarka heerarka jirka ee kolestaroolka jirka sidoo kale waa qiyaas muhiim ah oo ah in laga xoroobo dhibaatooyinka la xiriira. Dhaqdhaqaaqyada hawlaha loogu talagalay in lagu jimicsado habka wadnaha iyo xididada ayaa sidoo kale ah hab wax ku ool ah oo caafimaad leh markaad isticmaasho Anavar.
Inta badan dadka isticmaala steroids waxay ku dhacaan dhibaatooyinka testosterone ee isbedelka. Daawooyinka intooda badani waxay yareeyaan wax soo saarka hoormoonka. Heerka xakameynta wuxuu ka duwan yahay mid ka mid ah steroid ilaa mid kale, Anavar way ka ammaan badan inta badan inta kale ee hore ee hore. Si kastaba ha noqotee, markii aad qaadatey Anavar, waa muhiim inaad tixgeliso isticmaalka kale ee testosterone indho-indheeya hoormoonka. Tani waa tallaabooyin taxadar leh si loo hubiyo in mid ka mid ah uu xor ka yahay heerarka aan caadiga ahayn ee hoormoonka jirka. Si kastaba ha noqotee, hoos u dhaca heerarku way kala duwanyihiin qof kale. Qaar ka mid ah, isticmaalka Anavar wuxuu keeni doonaa hoos u dhac 50% wadarta guud ee testosterone. Qeybta soo hartay waxay weli tahay mid heer sare ah, waana inay keenaan hal alaarmi.
Wax soosaarka joogtada ah ee testosterone ayaa dib u bilaabi doona isla markiiba isticmaalka Anavar waa la joojinayaa. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan inay noqoto bukaanka, sababtoo ah soo kabashada ayaa laga yaabaa inay qaadato muddo dheer ilaa inta dhammaan steroid ay ka nadiifiso jirka. Hawlgalku waa la kicin karaa iyada oo la samaynayo daaweynta wareegga dambe ee geedi socodka kaas oo ah nidaam xaqiijinaya in jidhka laga saaro dhammaan Anavar oo jooga.
Dhammaan C17-a steroids ayaa lagu yaqaan inay sunta ku keento sunta. Anavar oo ah mid ka mid ah maaha mid ka reeban inkastoo si qoto dheer uga hooseysa. Isticmaalka joogtada ah wuxuu keenayaa kor u kaca heerarka beerta beerta. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay dhacdaa marka daroogada la isticmaalo waa qadar aad u sarreeya. Qiyaaso daaweyn ah ayaa lagu ogaadey in ay saameyn ku yeelato beerka laakiin ilaa daqiiqad ah. Waxyaabaha muhiimka ah waa in kastoo enzyme la og yahay inay sababto korodhka qiimaha enzimma beerka, tani macnaheedu ma aha in loo turjumo waxyeelada xubnaha. Waxa uu steroidku u yahay inuu keeno buufiska beerka, tani waxay sababi kartaa dhaawac muddo dheer ah haddii aan horay loo maareeynin. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah taxaddarrada ay tahay inay qaadaan si looga hortago dhibaatooyinka beerka ee isticmaalka Anavar:
Qofka yaqaan 'dhibaatada beerka' waa inuu ka fogaadaa isticmaalka Anavar gebi ahaan ama mid kasta oo kale C17-anabolic steroid.
Khamriga waxaa loo yaqaanaa inuu kaalin weyn ka ciyaaro xajinta beerka beerka. Sidaa daraadeed isku xirka khamriga leh Anavar ama steroid-ka kale ee C17-aa waxay dhib u geysan kartaa caafimaadka macaamilka.
Qiyaas kale oo muhiim ah waa in la isticmaalo Anavar ugu badnaan siddeed toddobaad kaddib markaad u baahato baaritaan si loo hubiyo in qiimaha enzimmaada beerka ay ku soo noqdaan caadi.
Mid ka mid ah waa in uu sidoo kale ka fikiro isticmaalka detoxifier maaddaama ay sii wadaan isticmaalka Anavar si loo yareeyo culeyska ah in qashin laga qaado qashinka beerka.
Anavar waxay ku siisaa lumis weyn oo dufan badan waxayna kordhisaa xoog. Qof kasta ayaa ku ammaanaya adiga oo raacaya jilicsan, jacayl iyo jir adag oo aad horumarin doonto. Inaad noqoto steroids anabolic, waxay kordhisaa muruqyadaada adiga oo aan ku siin miisaan dheeraad ah.
Si kastaba ha ahaatee, si aad u abuurto jirkaaga riyadiisa, waa inaad si adag u noqotaa cunto nadiif ah iyo tareen isku mar ah. Waa kuwan waxa aad u badan tahay inaad hesho;
Natiijooyinka ka dambeeya usbuuca ugu horeeya - Waxaad lumin doontaa miisaanka biyaha aan loo baahnayn inta lagu jiro waqtigan. Xitaa ka sii fiican, waxaad ogaan doontaa inaad hadda dareento oo aad u eegto si ka wanaagsan. Sidoo kale, waxaad dareemi doontaa firfircooni badan.
Natiijooyinka ka dambeeya toddobaadkii labaad - Hadda waxaad ogaatay in aad lumisay dufan badan oo maqaarku u korayo. Awooddaada xoogga leh waa la ammaani karaa, muruqyadaada way sii kordhayaan.
Natiijooyinka ka dib afar toddobaad - Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in jirkaaga uu noqday mid xoog badan oo dillaacay. Bil gudaheed tababar adag iyo dheelitir, hadda waxaad kor u qaadi kartaa miisaan culus oo aad u maleyneysid in aad kor u qaadi kartid. Dhammaan tani waa natiijo ka dhalatay xoog u yeesha inta uu gubayo dufanka isla wakhtigaas.
Natiijooyinka ka dib lix todobaad - waan ogahay in aadan heli karin muraayada ku filan hadda. Muruqyo badan oo dillaacay, xooggan iyo kuwa adag ayaa hadda muuqda. Qof kasta indhahiisa kama heli karo.
Natiijooyinkan guud ahaan waa qof ku habboon qaab muuqaal ah oo aqoon fiican u leh diirinta iyo tababarka laakiin wuxuu u baahan yahay dhiirigelin yar. Haddii aan lagugu cunsuriyeynin jimicsi iyo jimicsi, waxaa laga yaabaa inaad hesho natiijo gaabis ah.
Dadka cayilan iyo dadka cayilan, lumista miisaan badan ayaa noqon doona mid aad u fudud, laakiin ma noqon kartid inaad kiciso hal bil iyo badh. Si aad u gaarto waxaad u baahan doontaa inaad naftaada siiso toddobaadyada 20-25.
Steroid waxaa lagula taliyaa dumarka, laakiin ragga ayaa wali isticmaali kara si loo gaaro murqaha caatada ah iyo luminta dufanka. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo iyada oo lala jaanqaado kale oo la jarayo si loo hubiyo waxtarka ugu sarreeya. Diidmada, steroidku si buuxda uma shaqaynin maadaama isticmaalka uusan keeneynin abuuritaanka muruqyada buluuga ah sida steroids kale. Si kastaba ha noqotee, tani waxay ka dhigeysaa doorasho aad u dooratid ciyaartoyda ragga ah ee doonaya in ay dhisto jir caafimaad qaba oo aan weyneyn. Waqtiga hadhaaga ah ee steroidku waa mid gaaban, tani waxay u sahlanaan kartaa ciyaartoyda aan dooneynin in ay tijaabiyaan habboon isticmaalka steroids.
Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso sababta ay haweenku ujoogaan bakhaarro maraakiib ah oo dhan. Qarsoodi yar ayaa ah in badankoodu ay ku jiraan Anavar. Inkasta oo ay haweenku lumi karin dufanka badan ee ragga, waxay ka caawisaa inay xoojiyaan habka luminta dufanka. Waxaa badanaa loo yaqaan '' steroid gabar '.
Marka laga reebo taas, waxay xoojisaa muruqyada si ay u siiso firfircooni, muuqaal ah. Waxaad heli doontaa in Anavar waxaas oo dhan u sameeyo dumarka leh qiyaas yar oo yar. Marka la isku duubo qorshe jimicsi iyo nadaafad nadiif ah waxay ka caawisaa haweenka inay gaaraan natiijooyin degdeg ah oo wanaagsan.
Dumarku waxay noqon karaan kuwo dhif ah, sidaas awgeed dumarku waa inay ku dadaalaan inay bixiyaan dareenka badan ee jirkooda inta lagu jiro maamulka steroidka. Waxyaabo kale oo cajiib ah halkan! Anavar ma keento aromatization, mana aha inaad wax ka qaadato irbado. Nidaamkan steroid-ka ee xoogga leh ayaa iftiimin doona noloshaada sida haweeney adoo ku siinaya habdhaqankaaga iyo tayada ee aad mar walba ku riyootay.
Anavar waa caado si loogu caawiyo dumarka inay ku haboonaadaan. In kasta oo isticmaalka steroids ee ragga loogu talagalay inay kor u qaado kor u qaadista xajmiga muruqyada hore loo sameeyay, isticmaalka haweenku waxaa loogu talagalay inay fuliyaan door ka duwan. Jirka dumarka waxay ka kooban yihiin dufan iyo muruq yar. Sidaa darteed, jidhkoodu waxay u baahan yihiin stero-khafiif ah oo gubi doona dufanka xad-dhaafka ah isla markaasna ilaalinaya muuqaalka dheddig-laboodka. Tani waa sababta Anavar ay ugu fiican tahay haweenka rafcaanka la doonayo. Intaa waxaa dheer, steroids waxay keenaysaa samaynta muruqyada, tani waxay jidhka siinaysaa muuqaal ka sii adag oo raaxo leh.
Sida loo isticmaalo Anavar natiijooyinka ugu fiican
Daroogo kasta ayaa wax ku ool ah marka la isticmaalo si haboon. Anavar waxaa loo malaynayaa in uu soo qoro dhakhtarka caafimaadka kaas oo si fiican u yaqaan qiyaasaha loo baahan yahay in mid ka mid ah uu qaato.
Qofka qaadanaya daaweynta, qiyaasta qiyaasta ugu yar waxay ku saabsan tahay 5 ilaa 10mg. Tani waxaa la qaadan karaa ugu badnaan 20mg iyada oo ku xiran darnaanta kiiska. Maamulka ugu horreeya ee Anavar waa inuu qaataa 2 ilaa toddobaadka XNUM. Ka dib marka la dhamaystiro qiyaasta asaasiga ah, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato nasasho gaaban ka hor intaanad daaweynin. Qiyaasta soo socota waa inay sidoo kale qaadataa waqti u dhigma waqtiga ugu horreeya. Isticmaalka ujeedooyinka daaweynta ayaa sii socon kara ilaa natiijooyinka la rabo la gaaro. Hase yeeshee, waa in lagula taliyaa in la raaco talooyinka dhakhtarku had iyo jeer.
Sida hore loo sheegay, daroogada waxaa loo isticmaalaa ragga si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqa ciyaaraha fudud. Sidaa darteed, natiijooyinka wanaagsan, qiyaasta ku saabsan 30mg maalin kasta waa ku filan. Qaarkood waxay door bidaan in ay qaataan ugu badnaan 50mg, tani waxay wali tahay gudaha amniga. Waxaa jira dad kale oo jecel in ay isticmaalaan qiyaaso sare si kor loogu qaado. Tani waxay burburin kartaa muddada fog, laguma talin karo in lagu dhajiyo qadar sare. Sinnaanta Anavar ayaa loo yaqaanaa inay socoto ilaa sideed usbuuc.
Dumarka, qiyaastii 10mg badanaa waa ku filan tahay iyada oo aan loo eegin ujeedada loogu talo galay ee daroogada. Daraasad ayaa muujisay in haweenka intooda badani ay gaareen natiijooyin aad u fiican iyagoo qaadanaya qiyaastaas. Waxaa jira xaalado kale marka haweeney qaadan karto 15mg, laakiin waxaa loo maleynayaa in la sameeyo taxadar badan. Dulqaadashada heerarka hoose waa in marka hore la dhiso. Marka qiyaasta qadatey 20mg maalintiiba, waxaa jira khatar sare ee haweenka ku dhaca calaamadaha caabuqa. Sida ragga ah, wareegga Anavar wuxuu qaadanayaa sideed todobaad.
Saamaynta Nidaamka Anawar
Waxaa jira waxyaabo saameyn ah oo la xidhiidha isticmaalka steroid this loogu talagalay jirka. Qaarkood ayaa laga yaabaa inay iyaga oo dhan la kulmaan inta dadka kale, calaamado yar oo kaliya ayaa loo yaqaan. Aragtida saameynta daawadu waxay ku xiran tahay waxyaabo kala duwan oo shakhsiyadeed sida jidhkooda, qurxinta hidaha, dhibaatooyinka kale ee caafimaad iyo jiritaanka nidaamka isticmaalka.
Waxyaabaha soo socda ayaa ah qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee la kulma dadka isticmaala steroid:
Xoqan iyo finan. Anavar wuxuu leeyahay khibrad khafiif ah. Si kastaba ha noqotee, tani ma gebi ahaanba meesha ka saari karto suurtagalnimada calaamadaha qaarkood soo muuqanaya. Badanaa, kuwa calaamadahaas la kulma waxaa la gooyaa jinsiga. Maxaa dhacaya waa in ay jirto weerar culus ee timaha timaha by hormoonka. Tani waxay keentaa timo lumis. Xaaladaha kale, waxaa jira tallaabo xad dhaaf ah qanjidhada xayawaanka, tani waxay keenaysaa muuqaalka finanka maqaarka. Haddii qoyskaaga ka jiro qof uu ku dhacay diiqad, waxaad u badan tahay inaad la kulanto isla markii la isticmaalo Anavar. Sidoo kale haddii aad qabatay finan muddada qaan-gaarnimada, waxaad fileysaa in dib-u-dhac ku yimaado. Dadka isticmaala daroogada si weyn ayaa u dhibtooday labadan saameynood.
Sababtuna waxay hoos u dhacaysaa xiniinyaha. Xaaladdan waxaa loo yaqaana marxalado tijaabo ah. Maadaama Anavar uu leeyahay saameyno isbedbeddel ah, waxay tilmaan-bixinta isticmaalaan wax soo saarka testosterone. Marka steroid uu galo dhiigga, jirka wuxuu u tarjumaa sidii tijaabo dheeraad ah. Natiijadu, natiijadu waxay keenaysaa testosterone ka yar, iyo doorka ay ka noqdaan, waxay hoos u dhigayaan.
Saameynta tani waa mid la arki karo ka dib markii la joojiyo wareegga Anavar intii lagu jiray isticmaalka. Shakhsigu wuxuu u badan yahay inuu hoos u dhigo jinsiga iyo xitaa muruqyada lumista xaaladaha qaarkood. Calaamadaha waxay u badan tahay in ay weynaadaan haddii Anavar loo isticmaalo si kale oo loo isticmaalo steroids oo leh qandho iyo quwad sare.
Arrimaha Beerta. Inkastoo cabitaanka Anavar loo tixgelinayo inuu yahay mid faa'iido u leh kuwa aan jeclayn cirbadaha, waxay saadaalisaa isticmaalaha arrimaha beerka ee suurtagalka ah. Beerka waxaa lagu xakameynayaa cuntada cunada ka hor inta aan la gelin dhiigga. Sidaa darteed, isticmaalka Anavar oo ah cagaarshowaxik ayaa dhibaatooyin culus u keeni kara beerkaaga. Saameyntu waxay noqon kartaa mid ka sii xun marka loo eego kuwa lagu xakameynayo steroids anabolic sababtoo ah ugu dambayntu ma taabanayso xubnaha. Sidaas daraadeed waa lagugula talinayaa in aad iska ilaaliso daroogada haddii aad qabtid dhibaatooyin beerka ah si looga hortago in kor u kaco xaalad aan la xakameyn karin.
Dumarka, isticmaalka Anavar wuxuu u horseedi doonaa horumarinta calaamadaha virilization sida ballaarinta kintirka, koritaanka timaha wajiga iyo ballaarinta codka. Steroid waxay sidoo kale ku dhacdaa caadada caadada ah ee haweenka.
Walaaca. Isticmaalayaasha Anavar mararka qaarkood waxay dareemaan walaac iyo mararka qaarkood waxay keenaan hurdo la'aan.
Sidee ku saabsan Anavar Review?
Anavar laguma magacaabi karo steroid aad u xoog badan. Habka ugu wanaagsan ee loo tixraacayo waa steroid aad u muhiim ah oo u saamaxaya dadka isticmaala in ay gaaraan natiijooyinkooda la rabay iyagoo aan wax badan dhicin. Daawada waxaa loo dulqaadan karaa jirka, taas oo ka duwan noocyada kale ee steroids ee loo yaqaan in ay keenaan waxyeelo xun ee user. Sidaa daraadeed, waxaa loo tixgelin karaa sida ugu habboon ee steroids ee qaybta anabolic.
Fureka lagu gaaro natiijooyinka la rabo ugu dambeyntii waa hubinta inaad si haboon u isticmaasho iyadoon xadgudbin. Qeybo badan oo jirka ka mid ah, marka steroid anabolic lagu sheego, waxa ku dhaca maskaxdooda waa baaxad weyn. Iyadoo aan la garaneynin waa markaa ka dib Anavar, Isbedelada mararka qaarkood aan la arki karin. Anavar waa shaki la'aan xulashada saxda ah ee jirka ah ee doonaya inuu gubto dufanka oo uu yeesho murqo caan ah oo u oggolaanaya isaga / iyada inuu sii wanaajiyo jimicsiga. Mid ka mid ah ma aha inuu ka baqo in lagu tijaabiyo steroid this, gaar ahaan dumarka waa waxtarka ugu fiican haddii loo isticmaalo si sax ah.
Sida loo iibsado Anavar Online
Haddii aad rabto inaad yeelato steroid this meesha ugu fiican ee lagu ogaado waxay ku jiraan baraha internetka. Waxaa jira dad badan oo iibiya internetka kuwaas oo aad ka iibsan karto Anavar. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad ka digto in inta badan iibiyeyaasha halkan ay noqon karaan kuwo aan la aamini karin. Tani macnaheedu maaha inaad ka heli karto dhowr ah kuwa dhab ah. Sidaad u qorsheysey iibsadaan Anavar shabakada internetka, sidoo kale iska ilaali in aan loo oggolaan karin dawladda Mareykanka oo leh waqti iyo mar kale ku adkaysatay in daawada la qoro. Sidaa darteed, ka hor inta aanad u soo saarin si aad uga iibsato internetka Iibiyaha Anavar ama soo saaraha Anavar, hel dawo rijeeto.
Soo koobista Anavar
Marka la eego, Anavar waa unug kale oo loo yaqaan molecrolone. Waxay leedahay maadada walxaha qaraabada ah ee 306.4442. Maaddooyinka loo yaqaan 'molecule' ayaa loo yaqaanaa inay ku sii jiraan qaabka asalka ah xitaa ka dib marka la soo qaado oo aysan samaysanin dhismo aromatic ah xataa marka la jabiyo. Sababtan awgeed, ma jiro nidaam biyo oo la sameeyay. Waxaa jiray shirkado badan oo noocyada daroogada ah. Si kastaba ha ahaatee, wax soo saarka bilowga ah waxaa sameeyey GD Searle & Co. Ragga, qiyaasta ku habboon waxay ku taala inta badan 20 ilaa 100mgs maalintii. Haweenka, 3 ilaa 20mgs waa ku filan inay siiyaan natiijooyin fiican. Daroogadu waa firfircooni qiyaastii nus maalin waxayna ku jirtaa dhiigga xitaa saddex toddobaad kadib isticmaalka.
Здравейте изчетох всичко, но така и не намерих решението на моя проблем.Та той е пия стромба и анавар .Препаратите са към края си .Имам купен кломид и се чудя кога да почна да го пия.Много хора ми казаха че двата препарата не са (прегнил не искам не ми понасят игли)
Waxaan ahay 53 waxaan qabay kansarka tayroodh, qanjidhada ayaa laga saaray. Waxaan kasbaday 65 lbs sanad gudihiis. Waxaan rabaa inaan iibsado heshiiska dhabta ah var. Wali miyey shaqeyn doontaa maadaama aanan lahayn qanjirka tayroodh? Alaabadaadu ma tahay heshiiska dhabta ah?
Hola, mi duda es máximo se puede tomar 8 semanas 30 mg lo recomendable, se puede alargar más ?? O es dañino y después del ciclo cuanto tiempo se puede descansar para volver a usarlo? Wuxuu ganaaxayaa atléticos
Waan ka xunnahay, waxaanu bixinaynaa oo kaliya bakeeriyada caanaha Anavar, alaabta aan dhammayn
Hambalyo! Waxaan xiiseynayaa inaan soo iibsado Kiniiniga Anavar, waxaan raadineynaa bixinta joogtada ah oo leh Visa sida lacag bixinta. Ma ku siin kartaa kiniinada 10mg?
Hello, u mahad naqa xiisahaaga, wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan la soo xiriir emailkayaga iibka: [Email ilaaliyo]
Sideen dalban karaa wareeg ah? Sidee u isticmaashaa ama u isticmaashaa budada cayriin?
Hello Tyler, Waxaanu kaliya bixinaa budada cayriin ee Anavar, ma u baahan tahay sidoo kale?
hey anigu waxaan xiiseynayaa iibsashada Anavar tabs aad i siin kartaa qiimo, qiime, iyo qaddar goynta, sidoo kale inta ay qaadaneyso markabka
Haa, waan kula soo xidhiidhi doonaa email ahaan.
Qofna ma yaqaan sida aan u iibsan karo Anavar?
Waxaan si joogta ah blog iyo waxaan si dhab ah ugu mahadcelinayaa macluumaadkaaga. Maqaalkaga ayaa runtii ugu sarreysey xiisaha. Waxaan qori doonaa blog-kaaga iyo inaad hubiso macluumaad cusub ilaa hal mar asbuucii. Waxaan doortay inaad sidoo kale Feed. viagra iyada oo aan dhakhtar qorin
Waad ku mahadsantahay waxyaabo badan oo la wadaagayo dadka oo dhan oo aad dhab ahaantii ogtahay waxa aad ku hadlaysid qiyaastii! Soo dhigey. Fadlan ku dar wixii intaa ka badan la tasho boggeyga internetka =). Waxaa laga yaabaa inaan nala helno is-bedel beddelaad ah oo noo dhexeeya viagra 100mg
Macluumaadka faa'iido leh. Anigu iiga khiyaano waxaan helay shabakadaada si shakhsi ah, anigana waan ka naxay sababta sababta shilkani aanu uugu dhicin! Waxaan u calaamadeeyey. iibso viagra generic
Halkaan qof walba, waa kan ugu horreeya ee booqasho degdeg ah ee boggan, iyo maqaal dhab ah oo miro dhal ah ii leh, sii wado soo dhejinta qodobbadan.
Waa cajiib ah! Qaybkeeda dhabta ah ee cajiibka ah, waxaan ka helay fikrad aad u cad oo ku saabsan cutubkan. viagra iyada oo aan dhakhtar qorin